I-Casa Oasis @ Hacienda Pinilla
Phumula kuleli khaya lesitayela sangaphakathi esimangalisayo / sangaphandle. Itholakala endaweni yokuhlala kanye nendawo yokudlala igalofu i-Hacienda Pinilla, umndeni wakho uzojabulela iholide elishisayo nokuthile kwawo wonke umuntu.
Amakamelo okulala amahlanu, okugeza amahlanu, indawo yokulala eyi-12.
Indawo yethu inomklamo wezindawo ezishisayo kanye nobuhle besimanje obuhlanzekile, bulungele ukubaleka okunethezeka!
Isitayela sangaphakathi/sangaphandle silungele imindeni emikhulu noma amaqembu afuna ukujabulela isikhathi sawo ndawonye kodwa abe nenkululeko yokwenza izinto ezahlukene.
Indlu inamakamelo okulala amahlanu, wonke ane-AC, omatilasi bezinkanyezi ezi-5, nama-smart TV.
Ngaphandle kwezindawo zokuhlala zikanokusho nezinsiza ezisezingeni lomhlaba, sakhe ikhishi elingaphandle kanye nechibi lokubhukuda elihle ukuze uhlale kulo. Kodwa akugcini lapho, umaster uneshawa nobhavu ovulelekile ukuze ube nesikhathi sokuphumula uwedwa. I-oasis yangasese.
Ngesikhathi uhlala lapha, wena nomndeni wakho ningajabulela ubusuku obuhle begeyimu yomndeni, nibhukude ngaphansi kwezinkanyezi, futhi nipheke i-pizza kuhhavini wethu we-pizza ongaphandle.
Into eyodwa eqinisekile, uzoba nesikhathi esingcono kakhulu nabangani bakho nomndeni lapha!
Wena nomndeni wakho niyakwazi ukufinyelela ku-clubhouse engasebhishi ka-Hacienda Pinilla (imali yokusebenzisa amaminithi angu-15 umndeni ngamunye). Kukhona nejimu, iphuli, indawo yokudlela, imisebenzi yangaphandle, nokunye.
Ngaphezulu kwamakhilomitha amathathu ogu kanye namahektha angama-4,500 XNUMX endawo yomlando wamapulazi, KUNINGI ongakwenza lapha!
Njengoba usendaweni engavamile ye-Costa Rica, uzothola ithuba lokuchitha izinsuku zakho kwamanye amabhishi amahle acezile, ufunde ukuntweza, noma ukudlala i-snorkel emanzini aluhlaza wesafire.
Ingabe ugubha umcimbi okhethekile? Singakusiza ekuhleleni iholide elihle e-Costa Rica, vele usazise ukuthi yini oyifunayo, futhi sizokuhlelela yona.
I-Costa Rica inikeza ulwazi oluyingqayizivele kule planethi, futhi manje, uzobona ukuthi kungani.
I-Hacienda Pinilla iyindawo yokungcebeleka ekhethekile elungele ukubaleka komndeni ngokuthula. Uthola ukuzwa ukuthula nokuzijabulisa konke ngesikhathi esisodwa!
Le ndawo ilungele labo abafuna ukundiza baqonde lapho beya khona. Kusele ihora nje ukusuka e-Daniel Oduber International Airport.
Lokhu kuhoxa endaweni eshisayo yikho sonke esiphupha ngesikhathi sokuphumula ukuba yikho. Izindlela zamabhayisikili, inkundla yegalofu, amabhishi ahlanzekile, izindawo zokudlela, izindawo zokudlela, amaklabhu olwandle, nobuhle bemvelo obumangalisayo. Shono iCosta Rica ilokhu ivotelwa njengenye yezindawo ezihamba phambili emhlabeni!
Izinzuzo nezinzuzo zika-Hacienda Pinilla:
Isevisi Yokuphepha Yamahora angu-24
Ihhotela le-JW Marriott kanye ne-Spa
Beach Club kanye Wellness Centre
Imizila Yebhayisikili Yezintaba
ngihlala ngithumela umyalezo nje